Global Voices teny Malagasy · 11 Avrily 2011
11 Avrily 2011
Jona 2021 18 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 11 Avrily 2011
Nizeria: Misiokantsera ny fifidianana ho solombavambahoaka 2011
Afrika Mainty11 Avrily 2011
Miresaka momba ny fifidianana solombavambahoaka tanterahina amin'izao fotoana [9 avrily 2011], raha tokony notanterahina tamin'ny 2 avrily 2001 izany, amin'ny alalan'ny fampiasana tenifototra #NigeriaDecides ny Nizeriana antsera [online].
Brezila: Momba ny Fanokafana Ny Tahirim-Bakoky Ny Fitondrana Jadona
Amerika Latina11 Avrily 2011
Napetraka ny fitorahana bilaogy ifarimbonana mba hangatahana ny fanokafana ny tahirim-bakoky ny fitondrana jadona miaramila Breziliana (1964-1985), tompon'antoka tamin'ny fampijaliana olona an'arivony sy famonoana Breziliana efa ho 380. ka tamin'ireo dia 147 no tsy mbola hita popoka ary tsy misy zavatra fantatra ny amin'izay niafaran'ny nofo mangatsiak'izy ireny. Mandrak'ankehitriny ny...
Ejipta: Adihevitra izay anjara toeran'ny Media amin'ny fisamborana bilaogeranoina
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana11 Avrily 2011
Tamin'ny 31 Marsa, nandefa izao siokantsera manaraka izao ny mpanao gazety sady bilaogera Sarah Carr manontany ny raharaha Maikel Nabil Sanad amin'ny fitsarana miaramila. Ny bilaogera Nabil moa dia nosamborina tao an-tokantranony ny 28 Marsa, ary nampangaina ho “nanompa ny tafika” sy namoaka [Ar] “vaovao diso momba ny tafika”. @Sarahcarr: Misy...
Ejipta: Basboussa ho filoha!
Nanambara tao amin'ny kaontiny Twitter ny mpanolotra fandaharana sady mpikatroka ejipsiana Bothaina Kamel fa mety hirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena ravehivavy. Indreto ny tora-po manohana sy manohitra izany.